Dhageyso:-Wareysi aanu Layeelanay Aqooniyaan Sheikh Nuur Abuukar Maxaa Laga Wareysatey Hee,, | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:-Wareysi aanu Layeelanay Aqooniyaan Sheikh Nuur Abuukar Maxaa Laga Wareysatey Hee,,
written by warsan radio 13/07/2016
Waxaan aaminsanahay in furaha nabada Soomaaliya ay qayb wayn ka tahay Goboladda Koonfur gabeed, sababta aan taas u leeyahay waxaan wada ognahay in baahida iyo nabad gelyo xumida ka jira goboladaas inay saameyn wayn ku leeyihiin nabada guud ee dalkeena Soomaaliya, tasoo salkeedu uu yahay Hogaan xumo iyo maamul la’aan. Umadda ka soo jeedo Koonfur Galbeed soomaaliya waxay soo mareen dhibaatooyin aan la soo koobi karin,
waxay u baahnaayeen siyaasad abuuri karta deganaasho iyo amaan buuxa. Waxaan wada ognahay in maamulka Koonfur Galbeed iska daa inuu sugo amaanka sedexda gobol uu masuulka ka yahay,
Xitaa uusan soo dhaafi karin Airport Baydhabo, halkii laga sugaayay inuu tago caasimadiisa Barawe. Waxaan kaloo marqaati ka nahay in masuuliyiinta Somaliland iyo Puntland ay ciidaha la tugadaan dadkooda ,
hogaanka KG soomaaliya wuxuu san awood u lahayn in salaada ciida uu la tugado dadka reer Baydhabo.Hadaadan dadkaagi ku qabin kalsooni yaad masuul u tahay?
Sida aan wada ognahay Goboladaan waxaa loogu yeeri jiray (SOMALIA’S bread basket) Tasoo micnaheedu yahay Dambiishii barwaaqada Soomaaliya.
Goboladaan hadeey nabad iyo amaan buuxdo helaan waxay awood u leeyihiin inay quudiyaan dalka Soomaaliya oo dhan si looga maarmo macaawinada cuntada ee aduunka ka imaaneeyso, dalkana uu u gaaro isku filaasho (Food security), Taasi awgeed nabad ka dhalinta Goboladaan waa masuuliyad saaran muwaadinkasta ee Soomaaliyeed. Mushkiladaha ugu waaweyn ee Maamulka Koonfur Galbeed soomaaliya haastaa waxaa ka mid ah:
1- Xukunkii oo dhan inuu hal gacan ku soo aruuray ama hal qays.
2- Danta Guud oo laga hurmariyay danta qaaska ah.
3- Maamulkii oo laga dhigtay jaran-jaro lagu gaaro hami siyaasadeed 2016.
4- Maamulka oo u shaqeeya sida gacansato ama dalaal.
Arimahaan aan kor ku soo sheegay waxay dadka ku abuurtay inay lumiyaan kalsoonida dowlada goboleedka KG Soomaaliya. Taas awgeed maxaa la gudboon shacabka Koonfur Galbeed?
Waxaan aaminsanahay in la gaaray waqtigii isbadal ay raadin laahyeen shacab waynaha reer Koonfur galbeed ee soomaaliya si ay nabad buuxdo u helaan, hadii kale waxaa hubaal ah inay dib uga dhacayaan umadda Soomaaliyeed ee ku guuleeystay inay yeeshaan maamul u shaqeeya dadka iyo degaanka.
Dhageyso:-Wareysi aanu Layeelanay Aqooniyaan Sheikh Nuur Abuukar Maxaa Laga Wareysatey Hee,, was last modified: July 13th, 2016 by warsan radio
Dhageyso+Sawiro:-Tababar lagu baranayo sida looga sameeyo warar iyo warbixino barakacayaalka oo maalintii 2aad ka socda Xarunta Idaacadda Warsan.
Dhageyso:-Barnaamijka Ma jiraan ilaa hada Barakacayaal dib ugu laabtay dhulkoodi,